Mammaaksa - Wikipedia
Mammaaksi afoola Oromoo keessaa tokko yoo ta'u jechoota beekkumsaa fi ogummaa qaban of keessaa qaba. Mammaaksi dubbii fiduufi gabaabsanii fixuuf ykn salphaatti namatti himuuf tajaajila.
Uummanni Oromoo mammaaksa isaatiin ragaa baha. Oromoon dubbii cimsanii fi gabaabsanii mi’eessuuniifi miidhagsuun fixuuf mammaaksatti fayyadama, keessaahuu warri maanguddoo. Yeroo baay’ee manguddoonni araarsufis ta’e marii hawaas-dinagdee adda addaaf yoo walga’an yaada isaanii gadi fagessanii garuu osoo dubbii hindheeressin ibsachuuf mammaaksatti fayyadamu.
Mammaaksi hawaasa Oromoo biratti waan hedduuf mammaakama. Fakkeenyaaf, qarutuma, tuffii, jaalala, hawwii, haqa, gootummaa, doqnummaa, jibbaafi kkf, agarsiisuuf nimammaakama. Ergaa mammaaksa tokkoo hubachuuf wantoonni adda addaa nama gargaaruu malu. Fakkeenyaaf, aadaa, seenaa, durdurii faa beekuu barbaachisaadha.
1 Hariiroo Maanguddoo fi Mammaaksaa
2 Fakkeenya mammaaksaa
Hariiroo Maanguddoo fi Mammaaksaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Mammaaksi beekumsaa fi muuxannoo maanguddootaati. Haasaan maanguddootaa yeroo baayyee mammaaksaan kan guutameedha, kunis dubbii gabaabsanii himuuf, dubbii mi'eessuuf ykn bareechuuf godhama. Kanaafis, sagantaa aadaa ykn hawaasummaa bakka maanguddoonni itti baayyatan keessatti mammaaksi baayyinaan dubbatama.
Fakkeenya mammaaksaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Oromoon iddoo mammaaksi qabu akka armaan gadii ibsa.
Dubbiin dubbii fida mammaaksi dubbii fixa.
Aaki jedhan waa tufan, mammaakan waa himan.
Dubbiin mammaaksa malee, ittoon soogidda malee.
Mammaaksi koobaa dubbiti.
Afoola Oromoo fi Walaloowwan[dead link]
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Mammaaksa&oldid=37114" irraa kan fudhatame